Izingxenyekazi zekhompuyutha - Abalandeli ▷➡️
Izingxenye zekhibhodi kanye nomsebenzi wayo ngayinye
February 1, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Ikhibhodi iyi-peripheral ebaluleke kakhulu yokufaka ulwazi kukhompuyutha. Ngokuvamile, okhiye bayo babhekisela kuhlamvu olulodwa noma ngaphezulu phakathi kwezinhlamvu, izinombolo, izimpawu ezikhethekile, nemisebenzi ethile. Indlela laba khiye abasatshalaliswa ngayo inomqondo othile. Sizokhuluma ngakho nokunye okuningi kulokhu... ufunde kabanzi
Inkumbulo ye-EPROM ihlanganisani kanye nomsebenzi wayo?
Januwari 28, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Amakhompiyutha athuthukisa inani elikhulu lemisebenzi ku-elementi ngayinye eyingxenye ye-hardware yawo ne-software, phakathi kwawo izinkumbulo ezimelela ingxenye ebalulekile yokugcina yonke idatha yedijithali nokuyicubungula ukuze kusebenze okokusebenza, kuyagqama. izogqamisa uhlobo lwenkumbulo... ufunde kabanzi
Yazi Izimpawu Nezinhlobo Zenkumbulo Ye-ROM
Thenga Abalandeli! Amakhompyutha adinga izinhlobo ezahlukene zememori ukuze asebenze kahle. Lokhu kufaka phakathi inkumbulo yokugcina, sibonga ngayo esingagcina ulwazi lwethu ngokuphephile futhi unomphela, kanye ne-RAM, ehlinzeka ngomthamo wokucubungula nesivinini kukhompyutha. Kodwa yini esiyaziyo ngenkumbulo... ufunde kabanzi
Yazi Izimpawu Zegundane noma Igundane
Januwari 27, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! I-Mouse iyithuluzi elisetshenziswa kumakhompuyutha futhi elifakwe kukhathalogi njenge-peripheral yokufaka, njengoba yasungulwa isixazulule izinkinga eziningi ekulotshweni kwedatha eyenziwa ngabasebenzisi, yingakho sikumema ukuthi wazi ukuthi yiziphi izici ze- Amagundane , imisebenzi yawo kanye nokubaluleka kwawo, ... ufunde kabanzi
Lungisa I-Hard Drive Yangaphandle futhi Londoloza Idatha
Januwari 26, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Ukuphatha I-hard drive yangaphandle usuka kwenye indawo uye kwenye kungabangela ukuthi idiski iphuke futhi idatha egciniwe ilahleke, ngisho noma imemori yangaphandle inqanyulwe ngephutha futhi ibisenza imisebenzi ethile, kungabangela le divayisi ukuthi yonakale. . Izindaba ezinhle ukuthi… ufunde kabanzi
Luyini uhlelo lwe-Raptor kanye nomsebenzi walo?
Januwari 21, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! I-Raptor Programme iyisoftware eyenzelwe iWindows futhi isetshenziswa njengethuluzi lekhompiyutha elivumela ukucaciswa kwemidwebo yokugeleza ngokwakhiwa kwama-pseudocodes, ukuze kugcwaliseke izinqubo nokuqinisekiswa kwezinhloso nezinhloso ezifanayo, ivumela ukuxazulula. izinkinga ezilula kanye nezinqubo zokubuyekeza. Ngiyakumema ukuthi sihlangane... ufunde kabanzi
Iqapha Izici nokunye
Thenga Abalandeli! Uma ufuna imonitha yekhompuyutha yakho yedeskithophu, udinga ukunaka izakhi ezakhayo. Ngakho-ke, kulesi sihloko sizokufundisa konke mayelana nezici zokuqapha okufanele zisetshenziswe ngokuhambisana nekhompyutha nokunye. Qhubeka ufunda lesi sihloko esithakazelisayo. Qapha Izici Namuhla... ufunde kabanzi
I-Hardware Classification kanye nezinhlobo zayo, Yazi
Thenga Abalandeli! I-hardware evame ukuba khona kukhompuyutha yenziwe yizo zonke izakhi zomzimba ezidlala indima eyisisekelo noma ehambisanayo ekusebenzeni kwayo. I-Hardware ilelo sethi yezingxenye ezibambekayo ezivame ukuhlukaniswa ngokwemisebenzi yazo ehlukene nezici. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuhlukaniswa... ufunde kabanzi
Yazi ukuthi yiziphi Izinqumo Zesikrini Nezinhlobo
Thenga Abalandeli! Yonke idivayisi enesikrini inesethi ehlanganisiwe yezibani ezincane ezibizwa ngokuthi amaphikseli, okuthi uma zihlanganiswa zakhe isithombe. Ukuze wazi ukuthi mangaki amaphikseli akhona esikrinini, kubalulekile ukwazi izinqumo zesikrini esinazo, ngakho sikumema ukuthi ufunde lesi sihloko. Bayini … ufunde kabanzi
Yazi Ubuhle Nobubi Bedrayivu Enzima Ye-SSD Yangaphandle
Thenga Abalandeli! I-Solid State Drives (SSD) ingamadivayisi esimanje futhi aguquguqukayo okwandisa ukugcinwa kolwazi kukhompyutha, akuvumela ukuthi ulondoloze izithombe, amavidiyo, imidlalo namanye amafayela athatha isikhala esiningi futhi ehlise ijubane izinhlelo, ngenxa yalezi zizathu, it. kungenxa yokuthi sikumema ukuthi ufunde lesi sihloko ukuze ... ufunde kabanzi
Izici ze-CPU nezingxenye zayo
Januwari 20, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! I-Central Processing Unit noma i-CPU, iyingxenye eyinhloko yemishini yekhompiyutha, lapho yonke imisebenzi nemiyalo enikezwa ngemishini yokufaka yenziwa. Abantu abaningi noma abasebenzisi namanje abazi ukuthi iquketheni ngaphakathi nokuthi isebenza kanjani ngempela, ngoba... ufunde kabanzi
Yazi Izimpawu Nokusebenza Kwe-Hard Drive
Thenga Abalandeli! Ukube bezingekho izinsiza zokugcina namuhla, bekungeke kwenzeke ukuba nekhompyutha yomuntu siqu ekhaya. Ingabe uyazi ukuthi uyini Umsebenzi we-Hard Drive? Uma ungazi, kulesi sihloko sizokutshela, ikakhulukazi ukubaluleka kwesici esibalulekile ekugcinweni kwezinto ezinkulu ... ufunde kabanzi
Funda Indlela yokufaka Ikhadi le-WIFI
Januwari 19, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Uma kuqhathaniswa nokugijima izintambo nokwandisa amaswishi enethiwekhi, ukuxhuma ikhadi le-WIFI kukhompyutha kungaba indlela eshibhile futhi elula yokwandisa inethiwekhi yekhompiyutha, lokhu kuyinto ongayenza wena nge-screwdriver nje. Funda kulokhu okuthunyelwe ukuthi ungafaka kanjani... ufunde kabanzi
Kuyini Ukuchofoza kwesokudla Kwegundane kanye nomsebenzi walo
Thenga Abalandeli! Ukuchofoza kwesokudla ingcindezi esheshayo enkinobho yegundane engakwesokudla futhi ikuvumela ukuthi unwebe imenyu ukuze uhlanganyele nento ekhethwe ngekhesa. Ikakhulukazi, ikuvumela ukuthi ukopishe, uhambise, ususe futhi uqambe kabusha into ekhethiwe noma ngabe iyifayela noma ifolda. Sikumema ukuthi ufunde kabanzi... ufunde kabanzi
Hlangana Nabaphrosesa Abangcono Kakhulu Namuhla
Januwari 18, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Iphrosesa inquma ukuthi ingakanani idatha ikhompuyutha engakwazi ukuyiphatha ngesikhathi esisodwa, izinto eziyinhloko okufanele uzicabangele lapho uthenga iphrosesa inombolo yamakhora adingekayo, uhlobo lwesofthiwe okufanele lusebenze, ukuhambisana kwephrosesa, kanye nesivinini sokucubungula. Funda ngalesi sihloko okungcono kakhulu… ufunde kabanzi
Liyini Ikhadi Lezithombe? Yenzelweni kanye nomsebenzi wayo
Thenga Abalandeli! Liyini Ikhadi Lezithombe? Uma uke wazibuza lo mbuzo, singakutshela ukuthi ikhadi lezithombe lingenye yezingxenye zamakhompyutha amageyimu. Leli khadi lisetshenziswa kumakhompyutha aphathekayo ukusebenzisa imidlalo yakamuva ye-PC, ngakho qiniseka ukuthi ufunda lokhu... ufunde kabanzi
Uyisusa kanjani i-Flash Drive Imodi Yokufunda Kuphela?
Januwari 14, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Kwesinye isikhathi sikuthola kungenzeki ukukopisha ifayela kudrayivu ye-USB. Kuze kube manje, lokho obekuyinkambiso evamile sekuyinkinga, yingakho ukubonakala kwalo mkhawulo kungayeki ukusimangaza. Kwenzeka ukuthi ngenxa yamaphutha esistimu izimvume zokuqopha ku-flash drive ... ufunde kabanzi
Yazi Izingxenye Zomthombo Wamandla
Thenga Abalandeli! Ugesi uwucezu olubalulekile ekusebenzeni kwanoma iyiphi ikhompyutha njengoba iphethe ukunikezwa kukagesi, futhi iqinisekisa ukuthi ugesi uzinzile ukuze izingxenye zangaphakathi zempahla zingathintwa ukushintshashintsha kwawo. Izingxenye zayo zivame ukubekelwa ukushisa okukhulu futhi ... ufunde kabanzi
Uyilungisa Kanjani I-Pendrive Engasebenzi Futhi Uyinakekele
Thenga Abalandeli! Amadrayivu epeni angamadivayisi okugcina anomthamo omkhulu wesikhala samahhala futhi, ngenxa yalokhu, adumile ekugcineni imininingwane yesikhashana noma ehlala njalo. Ngezinye izikhathi, ngenxa yesizathu esithile bayayeka ukusebenza, okuthiwa ngenxa yokuthi bavikelekile ngokubhala, isistimu yokusebenza ayifundi, nezinye izimbangela. Ngokusobala lezi... ufunde kabanzi
Kungani ikhibhodi yami yekhompuyutha ephathekayo ingasebenzi?
Thenga Abalandeli! Uma kwenzeka uhlangabezana nenkinga njengokuthi "ikhibhodi yami ye-laptop ayisebenzi", noma ikwenza ngendlela enesici futhi ufuna izixazululo ongazisebenzisa ukuze uyilungise, sinolwazi oluningi lapha ukuthi kungaba wusizo kuwe, ngakho... ufunde kabanzi
Izinhlobo Zekhebula le-USB Nezimpawu zazo
Thenga Abalandeli! Njengamanje kunezinhlobonhlobo zezesekeli zobuchwepheshe ezivumela umphakathi ukuthi uthuthukise intuthuko efanele esintwini, enikeza induduzo kanye nokufinyeleleka kalula olwazini olufanele, phakathi kwazo kukhona amadivaysi e-USB, amalaptop amancane akhiwe inkumbulo yangaphakathi, phakathi kwesakhiwo sawo sigqamisa izingxenye ezinjalo. njengekhebula... ufunde kabanzi
Iyini i-Cache Memory? Yenzelweni kanye Nezinhlobo
Januwari 13, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Amakhompiyutha amele into ecishe ibaluleke kakhulu emphakathini namuhla, ngoba iyisici esiyinhloko abantu abasisebenzisayo ukuxhuma ku-inthanethi kanye nomhlaba wamanethiwekhi, onolwazi oluningi, ngokuxhumana nalo mhlaba. Ikhompyutha igcina zonke izinhlobo kwe… ufunde kabanzi
Izinzuzo kanye nokubi kweHybrid Hard Drive
Thenga Abalandeli! Ama-hard drive amelela iyunithi ebonakalayo eyenza imisebenzi ebalulekile yokucutshungulwa kwedatha yekhompiyutha, manje sekuvele izindlela ezintsha ezivumela ukusetshenziswa nokuthuthukiswa kwemishini, phakathi kwazo i-hybrid hard drive igqamile, emele intuthuko kubuchwepheshe obusetshenzisiwe. kumadivayisi amaningi, ukuze... ufunde kabanzi
Iyini i-ROM Memory futhi isetshenziselwa ini?
Januwari 12, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Imemori ye-ROM ayivamisile ukunikezwa ukubaluleka okufana nalokho kwe-RAM nephrosesa kukhompyutha. Kodwa noma ungakukholelwa, inkumbulo ye-ROM iyingxenye ebalulekile, ithonya uhlelo lwesistimu yokuqalisa, yingakho kulesi sihloko sizokutshela ... ufunde kabanzi
Uyilungisa Kanjani Imikhakha Emibi Ye-Hard Drive
Thenga Abalandeli! Ukulungisa imikhakha emibi ye-hard drive kuzwakala njengento enzima ukuyenza, kodwa ingabe wake wazibuza ukuthi kungenziwa kanjani ngendlela elula ngaphandle kokufuna uchwepheshe noma uchwepheshe? Le nkinga ivamise ukuvela cishe kuwo wonke amakhompyutha futhi kulesi sihloko sizokutshela ukuthi kanjani... ufunde kabanzi
Yazi Izimpawu Nezinhlobo Zephrosesa ye-AMD
Thenga Abalandeli! Besifuna ukwenza lesi sihloko sikwazi ukukutshela ngomlando nezinhlobo zamaphrosesa e-AMD, kanye nochungechunge lwawo oluhlukene, uyini umehluko phakathi kwabo nokuthi yini okufanele uyicabangele lapho uthenga eyodwa, ngakho qhubeka ufunda ukuze uba uchwepheshe. Iphrosesa... ufunde kabanzi
Yazi Ngokweqiniso Ukuthi Ikhompyutha Idla Malini
Januwari 11, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Uma uke wazibuza ukuthi ikhompyutha idla malini futhi ungazi ukuthi iyini impendulo, kulesi sihloko sizokutshela ngendlela elula nelula, lo mbuzo ungase uphakame uma ufuna ukusebenzisa ikhompyutha entsha futhi yazi ukuthi angakanani amandla adla leyo mishini nsuku zonke… ufunde kabanzi
I-Motherboard noma Izixhumi ze-Motherboard
Thenga Abalandeli! Uma ungazi okuningi mayelana ne-hardware yamakhompiyutha, khona-ke singakutshela ukuthi enye yezingxenye ezibaluleke kakhulu ibhodi lomama, kuzo zonke izingxenye zixhunywe ukuze ikhompuyutha isebenze kahle, yingakho kulesi sihloko sikhona. uzosho lonke ulwazi ku... ufunde kabanzi
Yini i-GPU? Izimpawu nokusebenza kwayo
Januwari 7, 2021 por i-eltechnoanalyst
Thenga Abalandeli! Ukuziphendukela kwemvelo kwezobuchwepheshe kumelele enye yentuthuko enkulu emphakathini esivumele ukuthi sifinyelele amazinga amasha okuklama nezakhiwo kanye nentuthuko yezokwelapha. Kumele kuqashelwe ukuthi lokhu kuzuzwe ngomsebenzi oqhubekayo wezingxenye zemishini ezisebenzisana nayo, phakathi kwazo sizokwazi ukuthi iyini i-GPU, ... ufunde kabanzi
Amandla we-Hard Drive: Izinhlobo Nezimpawu
Thenga Abalandeli! Ubuchwepheshe buguquka njalo, njengoba kunjalo ngehadiwe. I-hard drive iyithuluzi elibonakala lilula eliklanyelwe ukugcina ulwazi kukhompyutha, inani ledatha elingafakwa ku-drive liyamangalisa, umthamo we-hard drive ungafinyelela ku-2 TB noma i-2000 GB. Yebo... ufunde kabanzi
Ikhasi1 Ikhasi2 Ikhasi3 Okulandelayo →